Mogadishu Journal » Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud oo si kulul u cambaareeyay qaraxyada ka dhacay Muqdisho
Mjournal :- Madaxweynaha dowladda Sooma aliya Xassan Sheekh Max’uud ayaa siweyn u cambaareeyay labo weerar ismiidaamin oo maanta ka dhacay magaalada kuwaa oo ay ku nafwaayeen dad ka badan 15 ruux.
Madaxweyne Xassan Sheekh Max’uud oo hadal ka jeedinayay kulan maanta ugu furmay magaalada Muqdisho culima’udiin Soomaaliyeed oo looga hadllayay dhibaatada xagjirnimada, ayaa ku tilmaamay weerarada dadka badan ku nafwaayeen ee maanta ka dhacay Muqdisho kuwa argagixiso.
Madaxweyne Xassan Sheekh Max’uud ayaa weeraradaas ku eedeeyay in ay ka danbeeyeen ururka Al Shabaab, wuxuuna sheegay in dawlada aysan ka cajisi doonin sugida amaanka guud ahaan dalka, isagoo sheegay in ujeedada kooxda Al Shabaab ay mar walba tahay cabnsi gelinta iyo dhibaateynta ummada Soomaaliyeed.
”Weeraradaas waxaa kuwo fool xun oo argagixiso oo ay soo qaadeen Al-shabaab, waxaana ugu tacsiyadeynayaan umadda Soomaaliyeed guud ahaan dadkii ku dhintay weeraradaas,” ayuu yiri madaxweyne Xassan Sheekh.
Inkastoo madaxweynaha uu ku eedeeyay Al-shabaab in ay ka danbeeyeen qaraxyadii ismiidaamin ahaa ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, ayaa haddana dhinaca kale waxaa xusid mudan in wali Al-shabaab aysan sheegin mas’uuliyada weeraradaas.
Labada qarax ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayeey dad goob joogayaal ah sheegeen in kan hore loo adeegsaday gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyay halka kan kalana uu fuliyay qof natiis hure ah.